Colaada eel-afweyn Caqli Bay U Baahantaye, Uma Baahna Ciidamo Iyo Hanjabad Afka Ah Oo Aan Sii Ridayn.
Colaada eel-afweyn Caqli Bay U Baahantaye, Uma Baahna Ciidamo Iyo Hanjabad Afka Ah Oo Aan Sii Ridayn.
Saturday April 07, 2018 - 13:05:37 in by Samiir Cabdi
Dawladihii kala danbeeyey ee jamhuuriyadda soo maray, way dhex galeen oo nabad waarta ka dhex raadiyeen beelahan sidkanta iyo sokeeyaha ah, laakin ilaa haddana waxa muuqata colaadii oo marba meel ka fad kudinaysa, su'aalo ayaa inna hor imanaysa oo inna odhanaaya tolow ma dawladdaha Ayaan ka daacad ahayn xalinta colaadan mise dadka Ayaan nabad rabin?
Ma siyaasiyiin ayaa ku lug leh colaad ku macaash ah oo far kula Jira?Ma mariinkii loo marilahaa daminta iyo heshiisiinta ayaa habaabay, oo halkiisii ka baydhay?
Allaa xaal og, laakiin waxaan xal u arkaa in laga baaraan dego hawshan jiitantey ee riiqda dheeraatay, oo ku dhow
in at u kala gudubto jiilalka soo socda, iyadoo raacaysa hayb iyo habab xun xun oo habada iyo nolasha dadka dila.
Waxa lagama maarmaan ah in aan mililka dusha laga dhayin ee hoos loogu dhaadhaco mililka iyo maashu halka at fadhiyaan!
Waxa maqan oo si miisaanleh u maqan kaalintii dawladda, iyadoo la moodo in ay dhaar uun ka shubto dhawr oday amaro iyo ciidamana dul dhigto ayadoo aad moodo in la gefsanyahay in deegaanka iyo dadku fidsanyihiin oo ka balaadhan yihiin kolba halka laga hanjabayo iyo deegaanka markaa beladu ka dhacdo!
Halka wax ka qalloocanyihiin way innoo wada muuqataa, waanay innagu soo noqnoqotaa, marka sidan shalay dhacday oo kale dhacdo waxa taga wasiirka arrimaha gudaha iyo col uu cago ku jiito horayso iyo danbayso, waxa dhacda in laga tago dadkii ay hawshu ka go'aysey ee daawaynteeda ka qayb noqonlahaa, waxa la geeyaa ciidamo, hargaysa laga daabulay, oo ayaamo joogjooga, marka kaarku jabbana iskaga yimaada oo ka soo huleela, intaas ka dib waxa holocda holocii iyo halaskii colaada oo la gama suuriyey!
Waxa xalka saldhig u noqonaya dib u heshiisiin balaadhan oo salka ku haysa in dhamaan qaybaha bulshadu ka wada qayb qaataan, sida ururada rayidka ah, haweenka oo ay aad u taabtaan colaaduhu, cuqaasha, salaadiinta, indheer garadka bulshada, golaha guurtida oo kaalintoodii maroorsantahay, taas oo ay garab socoto hoggaamintii iyo hagidii xukuumaddu, waa lama huraan in colaadaa la soo afjaro, iyadoo loo raacayo jidadka ugu habboon, oo aan laga meeraysan, si dhab ahna loo abbaaro.
Haddii taariikhda iyo tagtada dib loogu noqdo waxa jirtey xiliyo inna soo maray colaado intan ka balaadhan oo ka qaro waynaa laakiin waxa daminjirey oo xalin jirey dad iyo madaxdoodii oo Xalka isku si u arkayey, laakiin hadda waynu aragnaa in hadba wasiirka ugu tudhtudhlaysani cunaha iskaga duubo, isakagana duubijerey, welina raadadkaasi waa muuqdaan oo waa aafaysan yihiin!
Ma wanjal wasiiraysanbaa?
Ugu danbayn waxaan ugu baaqayaan bulshada deegaanadaa ku dhaqan in aan la kala celin oo haddba arrintooda lagu magic doonane in at xisaabiyaan oo caqliga kaashadaan inta agoomowdey, inta naafowdey, inta goblantay, inta kala irdhowdey, inta uurku talada la gami'la ee aad isu geysateen, intaas marka aad garawsataan ayaad xalka wax ka raadindoontaa inshaa allaahu.
Maxamuud Jamac Cabdi (Eng-Dacar)